SCIENCE TO SOCIETY: डा. धिताल ले के चमत्कार गरे त्यस्तो?
उनले जिउदो (ढुक ढुक गरि राखेको) हैन कि मरेको मुटु (ढुक ढुक गर्न छोडेको) लाइ जिउदो मान्छेमा प्रत्यारोपण गरे । डोनर मान्छे सम्पूर्ण रुपमा मरेको २० मिनेट पछि उनले मुटु निकाले । तर के चमत्कार गरे र मरी सकेको मुटुले पनि काम गर्यो त? उनले मरेको मुटुलाई एक किसिमको बक्समा राखे जसलाई "heart inabox" भनिञ्छ । यो बक्समा मरेको मुटुलाई ब्युताइञ्छ । त्यसको लागि एक बिसेस किसिमको झोल (preservation solution) प्रयोग गरेको भनिएको छ । उक्त बक्स भित्र राखेको मुटुलाई रगत दिएर अक्सिजन प्रदान गरिञ्छ । यसो गर्दा मुटु धेरै खराब हुन पाउदैन । अमेरिकाको ट्रान्समेडिक भन्ने कम्पनि बनाएको यस्तो बक्स भित्र मानब अंग राख्ने गरिएको अलि पहिले देखि नै हो । धितालको टोलीले प्रयोग गरेको झोल पदार्थ के हो भन्ने खुलेको छैन, यो पदार्थ र बक्सको प्रयोग नै अहिलेको नया उपलाधि हो । यस्तो झोला पदार्थ अरु मानब अंगको लागि प्रयोग भै सकेको छ ।
उक्त बक्समा मुटुले फेरी ढुक ढुक गर्न सुरु गर्छ र केहि समय फेरी बिउतेको मुटुलाइ जाची सके पछि उपयुक्त लागेमा मात्र जिउदो मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्न सकिञ्छ । डोनर मरेको ३० मिनेट भित्र मुटु निकालेर उक्त बिसेस झोलमा डुबाइ सक्नु पर्छ नत्र मरेको मुटु फेरी बिउतिन सक्दैन । बक्स भित्र राखेको मुटु, जुन झोलमा डुबेको हुन्छ, लाइ अब जहाँ सुकै लगेर प्रत्यारोपण गर्न सकिञ्छ । उदाहरणको लागि डोनर मान्छे नेपालमा भेटियो भने डोनर मुटुलाइ उक्त बक्स र झोलमा राखेर अस्ट्रेलिया पुर्याएर मुटु लिनेको मा राख्न सकिने भयो । तर उक्त बक्समा राखेको मुटुलाइ कति समय भित्र प्रत्यारोपण गरि सक्न पर्छ त्यो खुलेको छैन । त्यसै गरि ३० मिनेटको समयलाइ बढाउन सकेको खण्डमा अझै यो प्रविधिले फड्को मार्ने थियो ।
अहिले सम्म डा धितालको टोलिले तिन वटा यस्तो प्रत्यारोपण गरेका छन्, तिन वटै सफ़ल ।
यो अंग प्रत्यारोपण नेपालीको लागि त लासाको सुन जस्तै हो तर बिज्ञान र प्रविधिको बिकास र नेपालीको आय स्तर बढ्यो भने मरेको मुटु हालेर बाच्ने दिन नेपालीको पनि आउन सक्छ ।